လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ဖြစ်တတ်ရာရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ဖြစ်တတ်ရာရာ
Posted by Shar Thet Man on May 29, 2013 in Food, Drink & Recipes, Think Different | 15 comments
ကျွန်မက ယခုခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ လုပ်နေသူတစ်ဦးပါ။ ကျွန်မတွေ့ကြုံဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုထဲက တစ်ခုကို စာဖတ်သူကို မျှဝေပေးချင်လို့ပါ။
ဧည့်သည်တွေနှင့် အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်ငန်း Sales & Marketing ဌာနကိုမရောက်ခင်က ဟိုတယ်တွေနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့်၊ ဧည့်သည်တွေမြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်စဉ် နေစရာရှာဖွေပေးနေရသည့် Reservation ဌာနမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ Reservation ဆိုသည် အခန်းဘွတ်ကင် တင်ခြင်းဖြစ်ကာ ကြိုတင်နေရာယူခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Reservation လုပ်ငန်းကို ယခင်တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ (၇)လ ကျော်လောက် ကျွန်မလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ (၇)လကျော်ဆိုသည့် ကာလသည် ရင့်ကျက်သည့်အတွေ့အကြုံရရန် ကြိုးစားနေသည့် ကာလဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး မျက်ကန်းတစ်ယောက်လို စမ်းတ၀ါးဝါးနှင့် အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
ဘွတ်ကင်တင်လျှင် ဖြစ်တတ်သည့် ပြဿနာလေးများကို တီးမိခေါက်မိသိရှိထားသော၊ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံအဆင့်ထက် တတ်မြောက်ထားသော ကျွန်မ လွန်ခဲ့သည့် သုံးလက Aureum Palace Hotel ငွေဆောင် နှင့် ပြဿနာအချင်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်ပုံက အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မ ဒီဇင်ဘာ(၂၉)ရက် ကနေ
(၃၁)ရက်အထိ ငွေဆောင်မှာ လူ(၆)ယောက်အတွက် အခန်း(၃)ခန်း ကို Sea View နှင့် တင်လိုက်သည်။ ဘွတ်ကင်က ကြိုတင်ရတော့ ဒီဇင်ဘာမတိုင်ခင်ကတည်းက ကျွန်မတင်ထားတာ သေချာပါသည်။ မည်သည့်လက တင်ထားတာလဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ သည်လိုနှင့် ဧည့်သည်ဝင်မည့်ရက်နှင့် တစ်ပတ်အလိုမှာ ကျွန်မ ဧည့်သည်ဆီက စာဝင်လာခဲ့သည်။ သူ၏ Flight မှာ နောက်ရွေ့သွားကြောင်း၊အလာနောက်ကျမည်ဖြစ်
ကြောင်း၊နောက်လ ဇန်န၀ါရီကိုရွှေ့ပေးရန်အဆင်ပြေနိုင်၊မပြေနိုင်သည့် အကြောင်းတို့ကိုကျွန်မကိုမေးပါတော့သည်။ ကျွန်မတို့ကဧည့်
သည်ကို၏ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးအလေးထားလုပ်ဆောင်နေရသည်ဖြစ်ရာ ဟိုတယ်များကို လိုက်ညှိုရပါတော့သည်။ တချို့ဟိုတယ်များကတော့ deposit (ကြိုတင်ငွေ/စပေါ်ငွေ)စနစ်တအားပြင်းထန်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်လျှင်ပြန်မအမ်းပေးသောကြောင့် အခန်းတော့ရသည်။ မလာလျှင် ငွေဆုံးရှုံးမည်ဟု ကျွန်မကိုပြောခဲ့သည်။ Aureum ဟိုတယ်နှင့်လည်း ကျွန်မဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပြောင်းရွှေ့၍ရသည်ဟု တစ်ဖက်ကလူက ကျွန်မကိုပြန်ပြောခဲ့သည်။ တခြားဟိုတယ်များနည်းတူ deposit ကိုကြိုတင်ကောက်ထားပြီး
သားဖြစ်နေမည်ဟု ကျွန်မထင်ထားခဲ့သည်။ သို့နှင့်ကျွန်မ ဧည့်သည်ပြောင်းလိုသည့် နေ့ရက်များကိုဟိုတယ်များနှင့်ညှိုပြီးပြောင်းခဲ့သည်။
ထိုစဉ် Aureum က ကျွန်မကို စာပြန်သည့်အခါမှတ်ချက်လေးတစ်ခု ရေးခဲ့သည်။
Remark : If you cancel or amend this booking in January, we will charge you 100% cancellation fees as per contract.
ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်မနားလည်လိုက်သည်က ယခုဘွတ်ကင်ကို ဇန်န၀ါရီလမှာ ဖျက်လျှင်(၀ါ)ပြောင်းလျှင် သူတို့ဘက်မှ ဖျက်သိမ်းခကို အပြည့်ကောက်ခံမည်ဟု ၍သာဖြစ်သည်။ သို့နှင့်ရက်ပြောင်းပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင် ဧည့်သည်ကသူတို့လုံးဝမလာနိုင်
ထို့နောက်ကျွန်မဟိုတယ်တွေကို နေ့တွင်းချင်းပဲနောက်နေ့မကူးရအောင် လိုက်ဖျက်ရပါတော့သည်။ ဟိုတယ်တို့ဘက်ကပြောထားသည့် အတိုင်း deposit များဆုံးကုန်သည်။ ထိုကိစ္စသည်မှာတင်ပြီးသွားသည်ဟု ကျွန်မထင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဘွတ်ကင်ဖျက်သိမ်းပြီး (၃)လအကြာတွင် Aureum ဆီက ဖုန်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်မ(၅)ရက်အလိုဖျက်ခဲ့သည့်ဘွတ်ကင်က Cancellation fees ထိသည်ဟု ပြောလာခဲ့သည်။ ကျွန်မအတော်လေးခေါင်းပူသွားသည်။ ပြာပြာသလဲလဲထိုဘွတ်ကင်
တင်ထားသည့်ဖိုင်ကို ပြေးရှာတော့သည်။ ကြည့်လိုက်ရာ သူတို့ရေးထားသည့် မှတ်ချက်လေးကိုတွေ့သွားသည်။ ဘွတ်ကင်ကို ဇန်န၀ါရီလမှာ ဖျက်လျှင်(၀ါ)ပြောင်းလျှင် သူတို့ဘက်မှ ဖျက်သိမ်းခကို အပြည့်ကောက်ခံမည်ဟု ၍သာဖြစ်သည်။ ကျွန်မက ဒီဇင်ဘာလ မှာပင်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်သည်။ ကျွန်မများနားလည်မှုလွဲမှားသလားဟု အထပ်ထပ်အခါခါဖတ်ကြည့်သည်။ ကျွန်မကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပြသပေးသော ဆရာသမားများကိုလည်း လှမ်းမေးကြည့်ရပါသေးသည်။ကျွန်မနားလည်ထားသည့်အတိုင်းသာဖြစ်
သည်။ ထို့နောက်ကျွန်မထိုကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန် Aureumကိုဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။ သက်ဆိုင်သူအစ်မတစ်ယောက်လာကိုင်ပြီး သည်ကိစ္စကိုအခုမှလာပြောနေရကြောင်း၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသာ ထပ်တလဲလဲပြောနေတော့သည်။ ကျွန်မကလည်း အစ်မတို့စာကြောင်းကို ယင်းကဲ့သို့သာနားလည်ထားကြောင်း၊အကယ်၍ Cancellation ထိလျှင် အစ်မတို့ဘက်ကထိုအချိန်ကတည်းကပြောရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊deposit ကောက်ထားပြီးပြီလားဟုမေးပြန်တော့လည်း ကြိုတင်ကောက်တတ်လေ့ရှိရာမှ သည်တစ်ခါမကောက်ထားလိုက်ရကြောင်း၊ ကျွန်မကလည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့လျှော့ပေးပါဦးလားအစ်မရယ်လို့ပြောသော်လည်း သူမဘက်က Cancellation fees
အပြည့်သာကောက်ခံမည်ဟုပြောပြီးဖုန်းချသွားခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ(၉၀၀)ဆိုသည့် ပမာဏသည် တစ်လ(၁၀)သိန်း၊(၁၅)သိန်းဝင်နေသည့် လူများအတွက်ဘာမှပြောမပလောက်သည့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သော်ငြားလည်း ကျွန်မတို့လို
နောက်နေ့များတွင် ကျွန်မ Aureum ကိုထိုအစ်မနှင့်ပြောရန် ဖုန်းထပ်ဆက်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်သူအစ်မကရှိနေသော်ငြားလည်း ဖုန်းမကိုင်အား၊အစည်းအဝေးပွဲသွားနေကြောင်း၊ လိုင်းမအားကြောင်း စသည်များနှင့်သာ တိုးခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်နောက်ဆုံးကျန်သော
နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ e-mail ဖြင့်စာပို့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်မလည်း
ကျွန်မနားလည်သလိုသူတို့၏မှတ်ချက်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ သူမဆီကစာပြန်မလာခဲ့ပါ။ အလုပ်များနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ ဟုကျွန်မမှတ်ယူခဲ့သည်။ နောက် (၂)ရက်အကြာမှသူမဆီမှ ပြန်စာကိုရရှိခဲ့သည်။ သည်တစ်ခါသူမက ကျွန်မတို့နှင့် ရှေးယခင်ကတည်းကလက်တွဲလာခဲ့သည့် ရင်းနှီးမှုကိုမထောက်ထားဘဲ သည်
Cancellation ကိုပေးချင်ပေး၊မပေးချင်နေ၊ ဒါနင်တို့ကိုယ်တိုင်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကတိကိုဖောက်ဖျက်တာပဲဟု ပြန်ရေးလာခဲ့သည်။ အမှန်ကကျွန်မကလည်း မပေးပါဘူးဟုသူမကိုပြောခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့policy အရပေးရမည်ကိုသိသည်။ သို့သော်လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် အနည်းငယ်လျှော့ပေါ့ပေးရန်သာ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်မလည်း ထိုဟိုတယ်နှင့်ရေရှည်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် ကိစ္စများရှိသည့်အတွက် သည်အတိုင်းသာပေးတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထို့ပြင် မေတ္တာပို့ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု ကျွန်မမှတ်ယူလိုက်သည်။
များမကြာမီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပေးပို့လိုက်သောစာကို ကျွန်မတို့လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထူး ကုမ္ပဏီ ဉက္ကဌကို တိုင်ကြားသောစာဖြစ်သည်။
“Aureum Palace Hotel များ၏ မန်နေဂျာဖြစ်သူ သည်ဈေးနှုန်းများကို စိတ်ထင်သလို ချယ်လှယ်၍ Travels Agency များကို လိုရင်လိုသလို၊မလိုရင်မလိုသလို ဈေးနှုန်းများကို မြင့်လိုက်၊ကျလိုက်နှင့် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကစားပြီး Travels Agency များကို ပါဝါပြနေပါသည်။ သူမသည် ကုလားမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူမျိုးခြားနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်ဈေးနှုန်းများ လျှော့ပေးခြင်း၊ ယဉ်ကျေးပျော့ပျောင်းစွာ ဆက်ဆံခြင်းများကိုပြုလုပ်ပြီး မြန်မာ Travels Agency များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အပြုအမူရိုင်း
စိုင်းခြင်း၊ဈေးနှုန်းနှင့် Services ပိုင်းတွင် ညှိုနှိုင်း၍ မရခြင်း၊ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် မြန်မာ Travels Agency များကို စောက်ဂရုမစိုက်သည့်
ပုံစံလုပ်ပြနေပါသည်။ ၄င်းအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများမှ Christmas နှင့် New Year Times တွင် တံစိုးလက်ဆောင်များယူ၍ ယခုကဲ့သို့မျက်နှာသာပေးဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင်၎င်းနှင့်ပက်သက်၍ အခြားဝန်ထမ်းများနှင့်
ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် အခြားဝန်ထမ်းများမှ သူမနှင့်ပက်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြခြင်းမရှိကြ၍ မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တစ်ဖက်သတ်အဆင်မပြေမှုများကို ခံစားနေကြပါသည်။ ယခုလည်း Contract တစ်ခါပေးပြီး ရောင်းပြီးသား Tour များကို Contract အသစ်များထပ်ပေးပြီး “ကြိုက်ရင်သုံး၊မကြိုက်ရင်နေ၊ဒါပဲ” ဟုဂရုမစိုက်သော လေသံဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံပြီး Contract အသစ်များကိုပေးသွားပါသည်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ထူး ကုမ္ပဏီ များအုပ်စု၏
ဉက္ကဌကြီးအား အကြံပြုတင်ပြလိုသည်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ဟိုတယ်များကို မုဒိတာပွားလျက် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာဖြင့် အားကိုးအားထားပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း အချို့သော ၀န်ထမ်းများမှ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းနှိပ်ကွပ်၍ နိုင်ငံခြားသားများအားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနေသည်မှာ လုံးဝမသင့်လျော်ပါ။ ဥက္ကဌ ကြီး၏ မူရင်းသဘောထားဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုသည့် ဆန္ဒများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဥက္ကဌကြီးအနေဖြင့် Aureum Palace Hotel မှ သူမအားဖယ်ရှားလိုက်ပါက Aureum Palace Hotel ၏ အနာဂတ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်တောက်ပလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဟု အထက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်မအတော်ကိုအံ့သြမှင်သက်သွားရသည်။ ကာယကံရှင်တော့ မည်သို့မည်ပုံခံစားရမည်မသိပါ။ သူမသည် ကျွန်မနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့သောသူပင်ဖြစ်သည်။ အခြား Agent များသည် ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်မည်ဟု ထင်မထားခဲ့ပါ။ ကျွန်မသိလိုက်တာကတော့ သူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းစိတ်မထားဘဲ အကောင်းစိတ်ဖြင့် မေတ္တာပို့လျှင် အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ ကျွန်မ သူမကိုမေတ္တာပို့သည်မှာ သူမ မကောင်းတာဖြစ်ပါစေဟူသော အကြောင်းချင်းရာများမပါဝင်သည်ကို ကျိန်၍ပြောရဲပါသည်။ တကယ်မေတ္တာထားပြီးမေတ္တာစိတ်ဖြင့်သာ ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းပြန်ကြားရသည်မှာကား သူမကိုအလုပ်ကပါ Force to resign ဖြစ်သောကြောင့် သူမဆေးများပင်သောက်၍SOSသို့ပင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီဆိုတာကိုပါပဲ။သနားပါတယ်ဟုပင်ဆိုရမည်လော၊သူ့အပြစ်သူ့ဒဏ်ခံရသည်ဟုပင် မျက်ကွယ်ပြုရမည်လောပင် မသိတော့ပါ။ သေချာသည်ကတော့ ကျွန်မနောက်ဆို
သတိကြီးကြီးနှင့်အလုပ်ကိုကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး ယခုလုပ်ကိုင်နေရသည့် Sales & Marketing ဌာနမှာလည်း အခက်အခဲရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်
ဟီး… နာမည်ကြီးပါ ပါလာပါလား….
ဖတ်သွားတယ်.. သယ်ရင်း… နောက်မှ လာပွားတော့မယ်…
လေးလေးထူးဆန်းရေ… ဒီမှာ တစ်ပို့စ်တက်နေတယ်…
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုသလိုသာမို့
လုံးဝ ညှိ မရရင်တော့
ကြည့် ကျက် သာ လုပ်ပေတော့ဗျာ
(အဲဒီဘက်ကို ဘာမှမသိလို့ ပြောချင်ရာ ပြောသွားခြင်းသာ)
နင် တစ်ယောက်ထဲ မသိတာများ မှတ်နေလား ..
နာလည်း သိဝူးး ဟီးး
တားတားလည်း အိုက်ဘက် ဘာမွှ မတိလို့
ဘာမွှ ပေါဒေါ့ဝူးနော် …
အိုက်ဒါ လာပေါဒါ .. ဟီးးး
သတိနဲ့ မေတ္တာ ပေါင်းစပ် ဝန်ဆောင် မှ တော့
အ ကောင်းဆုံး တွေ ဖြစ်လာမှာပါ
မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစာ ဟာ ရုံးသုံးစကား အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ကုမ္မဏီများ ၊ စာပေးစာယူ လုပ်ကြတဲ့ အခါ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ နားလည်သမျှ ကျိုးပဲ့ သော အင်္ဂလိပ်စာသားများ (ကျွန်တော် အပါအ၀င်) သုံးကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာလည်း အယူ အဆ တွေလွဲကြပါတယ် ။
ကျွန်တော်ရှေ့နေလိုက်ပြောရရင် တစ်ဘက် ကယူဆ တာက လည်း ဒီ booking ကို ဂျန်န၀ါရီလ ကို ပြောင်းပြီးမှ ထပ်ဖျက်ရင်တော့ cancellation ပေးရမယ် လို့ ဆိုလို ခြင်တာဖြစ်ပါတယ် ..
အဲ အဲ့ဒါတွေက လည်း ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲ ဆိုတော့ ထုံးစံ အတိုင်း အတိတ် ပြန်ခြေရာကောက်ကြရရင် tour agent အချို့ က cancellation ရက် ညိပြီဆိုရင် ရက်ပြောင်းသွားလို့ ပါ ။ ရက်ပြောင်းပေးပါ ဆိုပြီး လုပ်ပါတယ် ။
ှုဥပမာ .. သူ ပထမ တင်ထားတဲ့ ရက် က ၂၈-၆-၂၀၁၃ ဆိုပါတော့ ။
ဒီနေ့ ၂၉-၅-၂၀၁၃ မှာ ဖျက်မယ် ဆိုရင် ရက်၃၀ တွင်း ၀င်သွားလို့contract အရ ဘယ်လောက် ပေးရမယ် ဆိုတာ ဖြစ်နေပါပြီ ။ အဲ့ဒီအခါမှာ မဖျက်သေးဘဲ ရက်ပြောင်းသွားလို့ပါ ။ နေမကောင်းလို့ ။ ၀မ်းလျှောနေလို့ ။ ဘာဖြစ်လို့ ပါ ။ တစ်ပါတ် နောက်ကျသွားမယ်။ ၅-၇-၂၀၁၃ ကို ပြောင်းပေးပါဆိုပြီးတင်လိုက်ပါတယ် ။ အဲ ပြောင်းလဲပြီးရော နောက် နှစ်ရက် အကြာ ၃၁-၅-၂၀၁၃ မှာ cancellation ပြန်တင်တာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ ပြီးရင် ဟယ်၃၀ ရက် အတွင်းမှ မဟုတ်တာ ။ အဲ့ဒီ့လောက် မပေးနိုင်ပါဘူး ဆိုတာ ကို လုပ်ကြပါတယ် ။ အဲ့ဒါမျိုးတွေ ကို မကြာခဏ ဟိုတယ် တွေ ခံရပါတယ် ။ ခံရတာ များလာကြတော့ အောက်မှာ အခု လို remark တွေ ရေးပြီး သတိပေးရတဲ့အဆင့် ဖြစ်ကုန်တော့တာဘဲ ။ မှန်ရင်လည်း မယုံတော့ဘူး ဖြစ်ကုန်ရော..
တစ်ခါတစ်လေ ဧည့်သည်တွေဘက်က လူလည်ကျပြီးလဲ အဲ့ဒီလို လုပ်တတ်ကြပါတယ် ဆိုတော့ …
မေတ္တာဘဲ အပို့ ခံနေရမှာပါဘဲလေ .. ဒီလောကထဲ ၀င်မိတာကိုး .. … :hee:
အဲ အဲ ။။ နောက်တစ်ခု ရှေ့ နေလိုက်ဖို့ကျန် သွားလို့ ..
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ -၃၁ ဆိုတာ ဟိုတယ် တွေ အတွက် အသက် ဘဲ လေ .. အဲ့ဒီ့နေမှာ ဘိုကင်တွေ များတာ တင်တဲ့ သူတိုင်း မပေးနိုင်တာ ဖြစ်တတ်တာ ။ ပေးထားတဲ့ သူ က တစ်ပါတ် အလို မှ ကပ်ဖျက်တော့ ဟိုတယ် က နာပြီလေ ။ ချက်ခြင်းပြန်ဖြေ့ဖိုဆိုတာ ကံကောင်းရင် ရမယ် ။ ကံမကောင်းရင် မရဘူးဖြစ်သွားပြီ။ မြန်မာပြည်မှာက ၅ မိနစ်ခြား လေယာဉ်တစ်စီးဆင်းတာ မဟုတ်ဘူးလေ ။ walk in ပြန်ရောင်းရဖို့ဆိုတာ မသေခြာတော့ဘူး ။
တစ်ပါတ် အလိုမှ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ ကတည်း က ၁၀၀% ညိသွားပြီလေ .. အဲ့ဒီ့တုန်းက မတောင်းဘဲ ရက်ပြောင်းခွင့် ပေးလိုက်တာ က သူတို့ လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောမိပြီးသားလို့ မြင်ပါတယ် ။ စကားလုံး ပေါ် အငြင်းပွားတာ ကတော့ အပေါ်က ပြောခဲ့ သလိုပေါ့ .. သင်ခန်းစာ ယူစရာဘဲ ။ နောက်ဆို လမရေးနဲ့ in January နေရာမှာ again ဆိုပြီး ရေးခိုင်းရမယ် ..
မေတ္တာထားပီး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုဘာလား ..ကျော့် ဟားနီးမူး ခရီး အပ်ချင်ဒယ်ဗျာ ….
မှုံဂလေး အသက်မပြည့်သေးလို့ စောင့်နေဒါဘာ…နီးရင်ပျောဘာ့မယ်
local guest ကတနေ့ကို50000 ks နဲ့
အနှီးတိုးများက $50 ဆိုဈေးများကြောင်းဆို၍ဈေး
ဆစ်၏။local guest များတွင်ပေးရန်မလိုသော
အဖို့ ပြသနာပေါင်းသောင်းခြေက်ထောင်ခန့် ကြုံတွေ့ရ
Hotel ဘက်ပြောင်းခဲ့ ဟီးးးး
သျှားသက်မာန် ရဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး သျှားသက်မာန် ပြောသလိုထင်မိတယ်။
အဲဒီတော့ စဉ်းစားမိတာက အခြေခံပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့
မြန်မာစာနဲ့ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုထက်ပိုပြီး လိပ်ပတ်လည်အောင် ပြောနိုင်ရေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ အယူအဆမလွဲနိုင်တော့ပဲ ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လာမယ့် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းပြဿနာတွေ မရှိနိုင်တော့ဘူးပေ့ါ။
တည်းရုံမှတစ်ပါး တခြား ဗဟုသုတ မရှိပါသဖြင့်
ကထူးဆန်းပြောတာမှန်ပါတယ်…….ဟိုတယ်တွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းနာစရာပါ။…ဒါပေမဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလုပ်နေပြီးအင်္ဂလိပ်စာတောင်သေချာဖြောင့်အောင်မရေးနိုင်တာကတော့..ခန့်တဲ့လူပါအံ့သြဖို့ကောင်းနေပြီ။ ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာလဲမပေးပါဘူးလို့တခွန်းမှမပါသလိုသူ့ဘက်ကလဲရင်းနှီးမှုပျက်စေတဲ့စကားမျိုးတော့ မပြောသင့်ဘူးထင်ပါတယ်…နောက်ဆုံးတော့လဲကံတရားကဖန်တီးသွားခဲ့တာပဲလေ…။
တိုးကုမ္မဏီက သာမီးလေးတို့ ဂေါင်းစားခံပီး အဲဒီ ခရိုနီ ဟိုတယ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မနေဂျနဲ့.. ဦးကြောင်ကြီးဆီသာ လာခဲ့… ဧည့်သည်အတွက် အခန်း မရှိရင်တောင် သာမီးတို့အတွက် အခန်းရဖို့ အာမခံတယ်… ဦးကြောင်အိပ်ခန်းကို ပေးမှာ…… :harr:
အခုနောက်ပိုင်း … မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံခြားသား လာတည်းဖို့လောက်လောက်လားလား ဆားဗစ်ရှိတဲ့
(အနိမ့်ဆုံး ကြယ်သုံးလုံးဟိုတယ်)ဘွတ်ကင်တင်လျှင်တောင် …. အရင်ကထက် ပိုတင်းကြပ်လာတာတော့ သတိထားမိတယ် ….cancellation fees ကောက်ခံတာမျိုးရော ၊ ဘွတ်ကင် ကွန်ဖမ်းပေးတဲ့ အချိန် အရမ်းရက်ခ်ျဖြစ်တာမျိုးတွေရော … အရင်ထက် ပို ဆန်းဆစ်ဗ်ဖြစ်လာကြသလိုပဲ … ။ အရင်ကဆို peak seasonလောက်မှသာ အခုလိုဖြစ်ပေမယ့် … ခုနောက်ပိုင်း ဧည့်သည် အ၀င်များလာတော့ …. ဟိုတယ်တွေဘက်က ဈေးကိုင်လာကြတယ် ။